झट्ट सुन्दा सामान्य तर दिमाग खियाउँने ५ प्रश्नहरु - निर्भिक टल्कसमा नयाँ भिडियो - ज्ञानविज्ञान
कृपया भिडियो पोस्टको अन्तिममा राखिएको छ, हेर्नुहोला ।
तपाईको रमाइलो तथा दिमागी कसरतका लागि यहाँ हामीले दिमाग खियाउँने प्रश्नहरुको भिडियो लिएर आएका छौँ । यो निर्भिक टल्क्स च्यानलमा भएको दिमाग खियाउँने प्रश्नहरुको भाग ११ हो ।
दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु वास्तवमै रमाइला हुन्छन् । झट्ट पढ्दा वा सुन्दा सजिला लाग्ने त्यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ दिन केहि बेर धैर्य गर्दा नै राम्रो हुन्छ, किनभने झट्ट सुन्दा वा पढ्दा सजिला लाग्ने त्यस्ता प्रश्नहरुको सहि जवाफ भने अर्कै हुन सक्छ । स्कुल पढ्दा वा कलेजमा बेला बेला यस्ता दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु तपाईले जवाफ दिनु भएकै होला ।
जुन सुकै उमेर समूहका मानिसहरुलाई पनि यस्ता दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु रमाइला नै लाग्छन् । कतिपय यस्ता प्रश्नहरु अश्लिल पनि हुन सक्छन् । तर यहाँ हामीले राखेको भिडियो सबै उमेरका मानिसहरुका लागि उपयुक्त छन् ।
तपाईको घरमा केटाकेटी छन् वा तपाईलाई दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु मन पर्छन् भने नियमित रुपमा यस्ता प्रश्नहरुसँगको निकटताले दिमागमा स्फुर्ति ल्याउँछ । तपाईको घरमा केटाकेटी छन् भने उनीहरुलाई दिमाग खियाउँने प्रश्नहरुको हाजिरीजवाफ गराउदै गर्नुहोला । यस्ता प्रश्नहरुको खेलले केटाकेटीलाई प्रश्न सुन्ने धैर्यताको विकाश गराउँछ भने फरक किसिमले सोच्न सक्ने क्षमता पनि बढाउँछ ।
दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु पारिवारिक भेटघाटमा पनि निकै उपयोगी हुन्छ । हामी पारिवारिक भेटघाटमा अन्ताक्षरी जस्ता खेलहरु खेल्छौ । ति खेलहरुको आफ्नै महत्व हुन्छ । त्योसँगै यदि हामीले दिमाग खियाउँने प्रश्नहरुको हाजिरिजवाफ पनि खेल्ने हो भने यसले पारिवारिक भेटघाटमा छुट्टै रमाइलो गराउँछ । एक पल्ट कोशिस गर्नुहोला ।
जस्तै: यो भिडियोमा भएको थम्बनैलको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ । यो भिडियोको थम्बनैलमा एउटा प्रश्न सोधिएको छ, जुन यस्तो छ :
तपाई मेरो बाउ हो तर म तपाईको छोरो होइन । म को हुँ ?
यदि तपाईले यो प्रश्नको जवाफका बारेमा हतार गर्नु भयो भने तपाईले यसको जवाफ केहि अफ्ठ्यारो कुरा होला भन्ने सोच्नुहुन्छ तर यसको जवाफ असाध्यै सजिलो छ । तपाईले दिमागमा जोड लगाएर प्रश्नले देखाउँने दिशा भन्दा अर्कै दिशा तर्फ सोच्नु पर्ने हुन्छ । अंग्रेजीमा आउट अफ द बक्स सोच्ने कुरालाई यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यसैले दिमागी कसरत गर्नका लागि पनि यस्ता प्रश्नहरुको खेल उपयोगी हुन्छ । वास्तवमा दिमागको सोच्ने क्षमता अथाह हुन्छ । यस्तै दिमागी खेलहरुका कारण दिमागको नियमित कसरतमा योगदान पुग्ने गर्छ ।
माथि सोधिएको प्रश्नको जवाफ वास्तवमा के हो त ? यसको जवाफ कुनै जीवजनावार होइन भन्ने त तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो । यसको जवाफ के हो भन्ने थाहा पाउँन भने तपाईले भिडियो नै हेर्नु पर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त तपाईले अन्य थप ४ दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु पनि भिडियोमा पाउँनुहुनेछ । ति प्रश्नहरुको जवाफ दिन तपाईले भिडियो हेरेर पहिले प्रश्नका बारेमा थाहा पाउँनु पर्नेछ ।
यो भिडियो हामीले निर्भिक टल्क्स नामको युट्युब च्यानलबाट लिएका हौँ । निर्भिक टल्क्सका निर्भिक जो उमेरले १२ बर्षका छन्, उनी आफ्नो च्यानल निर्भिक टल्क्समा दिमाग खियाउँने तथा दिमागी कसरत गराउँने प्रश्न तथा पजलहरु राख्ने गर्छन् । तपाईले निर्भिक टल्क्स च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर निर्भिकलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
भिडियोको रमाइलो लिनका लागि तपाईले भिडियोलाई नरोक्नुहोला । हरेक प्रश्नको जवाफ दिनका लागि २० मिनेटको काउन्ट डाउन दिइनेछ । भिडियोलाई बिचमा रोकेर धेरै समय सोच्दा तपाईले प्रश्नको जवाफ त दिन सक्नु हुन्छ होला तर भिडियोको रोचकपनामा भने केहि कमी ल्याउँन सक्छ । यसैले काउन्ट डाउनलाई नियमित चल्न दिनु होला ।
निर्भिक टल्क्समा यो भिडियो जस्तै अन्य भिडियोहरु पनि दिमागी कसरतका लागि एकदमै राम्रा छन् । थप भिडियोहरु पनि हेर्नुहोला । त्यस्तै, यस्ता रमाइला र उपयोगी जानकारी तथा भिडियोहरु हामी ज्ञानविज्ञानमा राखिरहन्छौँ । हाम्रो पेज लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला ।
यदि तपाईलाई यो पोस्ट तथा भिडियो मन पर्यो भने कृपया सेयर तथा लाइक गरिदिनुहोला । धन्यवाद ।।
Don't Miss it लक्ष्यप्राप्तिका लागि केहि सुत्र
Up Next किन लगाउने कपालमा तेल , जान्नुहाेस् यसकाे फाइदाबारे
हामी जहिले पनि आफ्नो प्रगति चाहन्छौं, उन्नती चाहन्छौं, समृद्धि चाहन्छौं । तर, भनेजस्तै सबैकुरा ठीकठाक हुँदैन । आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न…